Accueil > Gazetin'ny nosy > Fanondranana entana any Amerika : Afaka i Madagasikara
Fanondranana entana any Amerika : Afaka i Madagasikara
Isan’ny sehatra namorona asa teto Madagasikara ny nahatafiditra an’i Madagasikara ho isan’ny firenena afaka manondrana entana any Etazonian’i Amerika tamin’ny fotoanandro, na ilay antsoina hoe “Agoa”. Nosembanin-drahona izy io tamin’ny 2009, noho ilay tranga teny amin’ny Episkopaly teny Antanimena ny faha-17 martsa 2009, dia ilay olana nateraky ny famindram-pahefana avy amin-dRavalomanana nankany amin’ny miaramila ary ny miaramila nikasa hanolotra azy ny filoha Rajoelina.
Ankehitriny dia fantatra fa isan’ny firenena afaka manondrana entana any Etazonia indray i Madagasikara.
Eo amin’ny lafiny toekarena dia isan’ny sehatra mampidi-bola vahiny ho an’i Madagasikara ny “Agoa” satria vola vahiny avokoa no sandan’ny entana miondrana any. Tokony tsy hadinoina fa tsy ny entana vita amin’ny zaitra na kanjo ihany no ananantsika fahafahana manondrana eo amin’ny tsena Amerikana amin’ity “Agoa” ity fa maro karazana, hatramin’ny vokatry ny fambolena, ny asa tanana, sy ny hazandranomasina… Noho izany , anjarantsika ny miezaka mamaky ny tsenan’i Amerika amin’ny entana maro vokarintsika.
Etsy ankilany, amin’ny lafiny sosialy dia tokony hitaky fifampiresahana amin’ireo mpandraharaha mpampiasa vola eto ka misahana an’io famokarana entana aondrana any ampita na ny “orin’asa afa-kaba” (enterprises franches) io ny fitondram-panjakana malagasy. Ny antony dia tsy voahaja ny zo maha-olombelona amin’ny ankamaroan’izy ireny. Tsy voahaja ny lalàna malagasy. Sanatriavin’ny vava, toy ny mpiasa andevozina ny mpiasa Malagasy amin’izy ireny.
Aoka tsy hatakalo vola vahiny ny zo aman-kasin’ny olom-pirenerna Malagasy fa raha sarotiny amin’ny fampanajana ny demokrasia sy ny tany tan-dalàna ny Amerikana dia adidin’ny fitondram-panjakana Malagasy ny mitaky ny fampanajana ny zon’olombelona amin’ireny orin’asa miantoka ny famokarana entana aondrana any Etazonia ireny.